Midowga Yurub oo dhimaysa balaayiin ay siiso ciidamada AMISOM & saamaynta ay yeelanayso (Imisa ayuu askarigiiba qaataa?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Midowga Yurub oo dhimaysa balaayiin ay siiso ciidamada AMISOM & saamaynta ay...
Midowga Yurub oo dhimaysa balaayiin ay siiso ciidamada AMISOM & saamaynta ay yeelanayso (Imisa ayuu askarigiiba qaataa?)
(Muqdisho) 08 Maajo 2019 – Midowga Yurub ayaa aad u dhimaya miisaaniyaddii ay ku bixin jireen ciidamada AMISOM ee Somalia u jooga ”nabad ilaalinta”, wixii loo gaaro bisha Luulyo ee sanadkan, taasoo ka dhigan inay bilaabanayso ka bixitaankooda dalka.
Tusaale ahaan, Wasaaradda Kaydka Lacagta Kenya ayaa heli doonta Sh5 bilyan markii la gaaro bisha Luulyo, taasoo ka dhigan hoos u dhac gaaraya 41.17%, marka loo eego Sh8.5 bilyan oo ay sanadkan heleen ilaa bisha Juun.
Intaa kuma ekee markale ayay hoos u dhacaysaa lacagta EU iyadoo noqon doonta Sh3.5 bilyan oo shilin markii la gaaro Luulyo 2020, iyadoo kaddib noqonaysa Sh3 bilyan oo shilin.
Kenya ayaa dalbanaysa in la siiyo Sh6.1 bilyan oo shilin, iyadoo horay qayb kale uga qaadatay ururka Midowga Afrika, iyadoo dalalka kalena ay sidoo kale yihiin.
Beesha Caalamka ayaa bishiiba askarta AMISOM siisa $1,028 (Sh103,728) waxaana deeto $200 (Sh20,180) uga go’daa arrimo maamul, iyagoo jeebka ku rita $800 (Sh80,722) oo nadiif ah bishii. Waxay kaloo dowladohooda ka helaan lacag kale oo uga timaada dalalka ciidamada ku qaaraama oo kala ah Uganda, Ethiopia, Burundi, Djibouti, Sierra Leone iyo Kenya.
Qorshuhu wuxuu yahay in markii la gaaro 2020 ay ciidamada Somalia ku fillaadaan amaanka dalka, balse waxaa muuqanaysa xilkasnimo darro ka jirta horseedka siyaasadda dalka (political elites), oo haatan taagan heer xitaa Xajkii khilaaf siyaasadeed la geliyo.
Previous articleHindiya oo Pakistan u diyaarsanaysa taangiga ugu casrisan Ruushka ee T-90 oo ay dalkeeda ku ”samaynayso” + Sawirro (Imisaa u dalban?)
Next articleAUN Danjire Kiimiko oo Muqdisho aas qaran loogu sameeyay + Sawirro